Isbaanishka ama Isbaanishka ISO kiiboodhka, keebaa habboon inaad isticmaasho? Soo ogow! | Waxaan ka socdaa mac
Isbaanishka ama Isbaanishka kiiboodhka ISO?
Pablo Aparicio | | Kombiyuutarada Mac, Tababarada
¿Kiiboodhka Isbaanishka ama kiiboodhka Isbaanishka ISO? Markii aan rakibeyno ama bilawno kombiyuutarka Apple markii ugu horreysay, waxaan aragnaa ikhtiyaar na weydiinaya haddii aan dooneyno inaan adeegsanno qaabka kumbuyuutarka ee Isbaanishka ama Isbaanishka ISO.
Laakiin waa maxay Isbaanishka ISO? Maxay u jiraan wax ka badan hal? Miyaanay ahayn inay dhammaantood isku mid ahaadaan? Waa hagaag maya, laakiin dhibaatada aan heli karno maaha sababta oo ah waxaa jira qaabab kala duwan oo kumbuyuutar ah guud ahaan, laakiin halkii aan dhihi lahayn dhibaatada, haddii ay mid tahay, waa Apple.
Dhibaato noocee ah ayuu leeyahay Apple? Xaqiiqdii, maahan in loogu yeeri karo dhibaato, laakiin waxay sameeyeen isbeddello markii dambe nagu wareerinaya dadka isticmaala. Marka haddii Apple ay isbeddel samaysay, maxaan ku doortaa: Isbaanishka ama Isbaanishka ISO? Caqli ahaan, haddii ay jiraan laba ikhtiyaar, waa sababta oo ah waxa laga yaabaa inaan u baahanahay mid ama mid kale. Qodobkaan waxaan ku sharixi doonaa waa maxay mid kasta oo ka mid ah qaababka kumbuyuutarka iyo midka aan dooran doonno iyadoo kuxiran nooca kumbuyuutarka aan haysanno.
1 Kiiboodhka isbaanishka ama Isbaanishka ee ISO
1.1 Kiiboodhka Isbaanishka
1.2 Kiiboodhka Isbaanishka ee ISO
2 Sida loo habeeyo kiiboodhka isbaanishka ISO
3 Sida loo dhigo @ kumbuyuutarka Mac
4 Astaamaha hal-taabashada iyo lahjadaha
Kiiboodhka isbaanishka ama Isbaanishka ee ISO
Si loo caddeeyo qaabeynta ay tahay inaan dooranno, waxaan arki doonnaa kiis kasta shaqsi ahaan si aan si buuxda ugu fahanno kala duwanaanshaha mid walba:
Xulashada Isbaanishka ee labada la heli karo waxaa loogu talagalay kumbuyuutarradii hore ee tufaaxa. Sida aad ku arkeyso sawirka, waxaan calaamadeeyay furayaasha qaar oo aan meesha oolin, sida "C braided" (ç), calaamadaha su'aasha, calaamadda lagu daray iyo xarfaha.
Haddii aadan adeegsan kumbuyuutar jira sannado badan, aad u tiro badan oo aanan xusuusnayn inaan arko wax isku mid ah (waxaa laga yaabaa inuu leeyahay xusuus xumo), waa inaad doorataa ikhtiyaarka xiga.
Kiiboodhka Isbaanishka ee ISO
Qeybinta Isbaanishka ISO waa ikhtiyaarka aan dooran karno haddii aan koox leenahay casri ah. Kiiboodhka sawirka madaxa iyo dhammaan kuwa aan maanta iibka u aragno waxay diyaar u yihiin inay adeegsadaan xulashada Isbaanishka ISO. Aniga oo aan sii sii socon, waxaan haystaa Mac oo durba jira 7 sano oo ay la timid kumbuyuutar la jaan qaadaya qaybinta "cusub".
Sida loo habeeyo kiiboodhka isbaanishka ISO
Sidaan kor ku idhi, ma xasuusto inaan arkay kumbuyuutar ay la socdaan qaabka sawirka, laakiin wax walba waa suurtagal. Haddii ay tahay kiiska inaad haysatid kiiboodh duug ah oo aad mid cusub soo iibsatay, waa inaad iibsataa u qaabee si ay u adeegsato Isbaanishka ISO qaybinta. Waxaan ku sameyn doonnaa adoo raacaya talaabooyinkan fudud:
Waxaan fureynaa dookhyada nidaamka. Sida caadiga ah, waxay ku jirtaa dekedda, midigta hoose.
Waxaan galnaa qaybta «Keyboard».
Gudaha Keyboard-ka, waxaan gujineynaa "ilaha ilaha laga soo galo" tab.
Ugu dambeyntii, xulashooyinka naloo soo bandhigay, waxaan ka dooranaynaa Isbaanishka ISO. Ahaanshaha isbeddel yar, muhiim ma noqon doonto in dib loo bilaabo kumbuyuutarka.
Sida loo dhigo @ kumbuyuutarka Mac
Tani waa su'aal ay baddelayaashu isweydiiyaan, sidaan naftayda u waydiiyey 10 sano ka hor: Haddii Mac uusan haysan fure AltGrSideen calaamada u dhigaa? Jawaabtu way fududahay oo doqon baan nahay marka nala siiyo: furaha Alt u Ikhtiyaar Waxay leedahay (ficil ahaan) shaqo la mid ah AltGr ee Windows. Waxa ugu fiican ee sidan ku jira ayaa ah in aanaan haysan kaliya hal fure oo ku yaal dhinaca midig ee baarka, laakiin waxaan haysanaa laba fure, mid ka mid ah dhinac kasta oo baarka ah. Tusaale ahaan, haddii aan cabno soodho oo aan rabno inaan ku qorno emayl ama aan qof ugu magacawno Twitter anaga oo isticmaaleyna bidix kaliya, waan gelin karnaa @Magaca isticmaalaha adigoo ku riixaya badhanka Alt bidix suulka iyo 2 ka oo leh giraan ama farta farta.
Sidoo kale, haddii aad waligaa fasal u aaddid inaad wax qorto ama aad la hadasho qof garanaya, waxay kuu sheegi doonaan inaan u adeegsan doonno fure ka soo horjeedka gacanta oo riixaya fure wax laga beddelay, sida Shift bidix dhig Raasamaalka "P" ama xaquuqda "A". Haddii ay tahay inaan qorno astaan ​​kasta oo saddexaad oo u baahan gacanta midig oo aan dooneyno inaan si dhakhso leh u qabanno, waxaan u adeegsan karnaa Bidix Bidix si aan u qorno astaantaas.
Astaamaha y lahjad hal-fure
Waan ogahay kiisaska dadka aan wax badan qorin ee aan jeclayn in loo isticmaalo laba fure si loo galo warqad, iyadoon loo eegin inta wax laga beddelay. Hadday taasi tahay kiiskaaga, waa inaad ogaataa in Mac-da aan u isticmaali karno isla nidaamka laga heli karo macruufka: marka aan dooneyno inaan calaamad gaar ah saarno macruufka, oo noqon kara lahjad ama noocyo kale oo xarfo ah, riix oo hay shaqalka ilaa ikhtiyaarrada ay muuqdaan, sida «á», «à» ama «ª». Doorashadan sidoo kale waxay kujirtaa Mac, inkasta oo waxyar kaduwantahay: hadaan fureyno furaha oo aan qabanno, xulashooyinka jira oo dhan waxaa lagusoo bandhigi doonaa nambar iyaga ka koreeya. Waxaan u adeegsan karnaa furayaasha isdaba-marinta (fallaaraha) si aan u dooranno calaamadda la doonayo ama waxaan u isticmaali karnaa mid ka mid ah lambarrada kore si aan si toos ah ugu galno calaamaddaas.
Wax shaki ah miyaad ka qabtay ku saabsan Kiiboodhka Isbaanishka on Mac?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Isbaanishka ama Isbaanishka kiiboodhka ISO?
Waan ogahay, laakiin waa maxay farqiga, ama waxa furayaashu beddelaan. Kiiboodhka Latin Amerika ma jiraa? (lahjadda dhinaca midig ee P)
Nasiib daro Maya. Waa inay toos uga dhigaan iyaga oo wata kumbuyuutarka Laatiin Ameerikaanka ah ee dheereeya, sida Samsung, HP, Dell, IBM, Lenovo, Asus, Sony, Toshiba, Acer, iwm.
Jawaab Jorge Núñez
yaasiin (@yaasiin) dijo
Labada ikhtiyaar aniga ayaa la igu calaamadiyey: Isbaanishka ISO iyo Isbaanishka oo keliya, aniguna waxaan u beddelaa Isbaanish kolba mar. Ma aqaano sida kaliya ee aan u oggolaado inaan calaamadeeyo Isbaanishka ISO iyo labadaba. Ma ogtahay?
Ku jawaab yam (@yamilaml)
Hambalyo Yam, waa wax lala yaabo in maadaama ay yihiin kumbuyuutar kala duwan. Miyaadan garaaci karin astaanta - oo ka muuqata bidixda hoose? Sidan ayaad kula sii joogi doontaa Isbaanishka (ISO)
Dhibaato ayaan ku qabaa furayaasha tirada ee ku jira macmaalkayga waxaan ku qoraa astaamo aniga iyo lambarada tusaale 12 <3º4 + 5`6`789
yaa i caawin kara
Ku jawaab enzo molina
waxa kaliya ee aan ka fekeri karo ayaa ah inaad haysato nooc ka mid ah qaabeynta qaldan ee Nidaamka Xulashada. Laga soo bilaabo wixii aan ka baari lahaa Keyboard-ka inaad ku haysato wax walba nidaam.
Waad salaaman tahay, waxaan xoogaa dhibaato ku qabaa MacBookkeyga, si daacadnimo ah uma isticmaali karo sifiican, wey I siiyeen, tusaale ahaan dalabka iPhoto waa la xanibay maxaa yeelay wuxuu leeyahay kama heli karo Mexico, marka laga soo tago xaqiiqda in aanan kala soo bixi karin codsiyada App Store caadi ahaan sida Instagram Facebook spotify tumblr iwm. Markii aan iyaga raadiyo, kuwa kale ayaa soo muuqda, ma ahan kuwii asalka ahaa 🙁 iMovie-na iima keento fursado badan oo aan wax kaga beddelo fiidiyowyadayda, fadlan, waxaan u baahanahay caawimaad 🙁
Sidee loo iibsadaa kiiboodhka Isbaanishka?
Ku jawaab MARCELINO VAZQUEZ VEGA
Mahadsanid Jordi Gimenez. Isboortiga Isbaanishku waa waxa ay ahayd inaad ku xusho qaabeynta.
Ku jawaab Sutri
ISO waxaa loogu talagalay Ameerika
Jawaab Percy Salgado
Ma dhigi karo calaamadaha su'aasha
Jawaab JULIAN Roman
garaac xasaasi ah dijo
Aad baad u mahadsantahay, waxaan soo arkay qormooyin kale, laakiin aniga waxba iima tarin. Tallaabooyinkani waa haa.
dhibaatada la xaliyay, waxay ahayd inaan tirtiro SPANISH oo aan uga tago kaliya SPANISH ISO….
Ka jawaab noqo
Isbaanishka MAYA «ce trencada». (Eeg DRAE). Tixraacan waxaa loo adeegsaday Catalan. Isbaanishka waxaa lagu yiraahdaa «kedar».
Canshuuraha ay Apple ka bixiso Yurub waxay kordhin kartaa bilaha soo socda
Australia waxay ku ballaarineysaa macluumaadka gaadiidka dadweynaha khariidadaha Apple